हिरासतमा रहेका पललाइ रुपनीको भावुक चिठी « Etajakhabar
रूपनी जी एम / काठमाण्डौ ।
मेरो प्यारो कलाकार पल, तिमी मलाई मन पर्ने एउटा कलाकार हौ । तिम्रो आनीबानी, मेहेनत, अरुलाई सम्मान गर्ने स्वभाव, धरातलाई बिर्सन नसक्ने तिम्रो मन आदि ईत्यादि सबै कुराले तिमी मेरो प्यारो मान्छे बन्न पुग्यौ । हुन त मेरो पहाड घर पनि तिम्रै गृह जिल्ला दाङमा पर्छ ।
तर तिमीसंग कहिल्यै भेट भएको छैन । भेट नभएपनि तिम्रो बारेमा लेखिएका धेरै समाचार पढेकी छु र पलेखेकी छु मैले । कुनैदिन तिमीसंग भेटेर कफीको चुस्कि लिंदै तिम्रा संघर्षका कुराहरु सुन्ने इच्छा थियो । तर मेरो इच्छा र सोंचाईभन्दा फरक भैदियो ।
जे नहुनु थियो त्यो त भई सकेको छ नै । तिमीसंग बसेर तिम्रा कुरा सुन्ने मौका यदि कुनैदिन मिल्यो भने त्यो दिन मेरा प्रश्नहरुले निकै नै भावनात्मक जवाफको अपेक्षा गर्नेछन् । तर आज समय र परिस्थितिले गर्दा तिमीलाई केही प्रश्न सोध्न मन लागेको छ ।
अहिले त तिमी तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छौ । प्यारो पल न म तिमीलाई सिधै प्रश्न सोध्न सक्छु न त तिमीले नै मलाई त्यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छौ । तर एक दिन त तिमीले यो मेरो पत्रमा समेटिएको प्रश्नहरु पक्कै पढ्ने छौ भन्ने आशा लिएको छु । त्यतिबेला जवाफ फर्काउने छौ भन्ने आशा छ ।
प्यारो पल, तिमीलाई मेरो पहिलो प्रश्नः तिमीले जसलाई ब’ला’त्का’र गरेको आरोप लगाईएको छ के तिमीले उनलाई ब’ला’त्का’र गरेकै थियौ त ? अर्थात के तिमीले ब’ला’त्का’र गर्दा उनको आवजमा चि’च्चा’हट थियो ? के तिमीले ती नाबालिग चि’च्चाउँ’छिन् भनेर मुखमा कपडाको बुजो लगाईदिएका थियौ ? के तिमी पहिलो व्यक्ति थियौ ? जसले उनको कु’मारि’त्वलाई लु’टेका थियौ ? यदि तिमी पहिलो त्यो ब’ला’त्का’री थियौ भने के उनको यौ’ ‘नीबाट र’ग’त ब’गेको थियो ? के उनको शरीरमा तिम्रा नं’ग्रा’का डो’ब’हरु छन् ? के तिम्रा दाँतहरु उनको ओँठमा गा’डि’एका थिए ? या फेरी तिमीले उनको स्त’नको नि’प्पल चुँ’डा’एका छौ ?
तिमी ब’ल’त्का’री हौ रे, उनले तिमीलाई यही भनेर प्रहरीकोमा जोहेरी दर्ता गराएकी हुन् हैन त ? उसो भए जवाफ देऊ तिमीले ती नाबालिग भनिएकी केटीको कुन कुन अं’गह’रुलाई चि’थो’रे’र, लु’छे’र, चो’ईँट्या’ए’र छे’दबि’च्छे’द बनाएका थियौ ? उनको भनाई अनुसार आखिर तिमी ब’ल’त्का’री न हौ ? उसो भए भन तिमीले कस्तो खालको ब’ला’त्का’र ग’र्यौ पल ? के तिमीले त्यो समय उनलाई आफ्नो द’रिद्र’ताले चि’थोरि’हंदा ओल्लो पल्लो कोठामा उनको आवाजले कसैको ध्यान ता’नेन ? जब कि उनको भनाई अनुसार त तिमीले ति नाबालिग भनिएकीलाई रातको समयमा ब’ला’त्का’र गरेका थियौ रे त्योपनि सुनसान जंगलमा नभई सुविधा सम्पन्न होटेलको आलिशान कोठामा । हैन तिमीले कस्तो खालको ब’ला’त्का’र गर्यौ ?
प्रिय पल, तिमीलाई पटक पटक ब’ला’त्का’री भनेर सम्बोधन गरिरहन मलाई पटक्कै मन छैन । तर तिमीलाई आज यो समाजले ब’ला’त्का’रीको उपनामले चिनिरहेको छ । हरेक शहरमा, हरेक गाउँमा, हरेक घरमा, सिंगो देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि तिम्रै विषयमा बहस चलिरहेको छ । तिमीलाई एकतर्फी माया गरेर मायामा पागल बनेकी एक नाबालिग भनिएकी केटीले आफ्नो बनाउन पडयन्त्रकारीको साथमा लागेर गरेको परपञ्चको बारेमा सबैलाई थाहा छ । र, पनि षडयन्त्र रच्नेहरुको पक्षमा बोल्ने जमात यही समाजमा छ ।
मेरो प्रश्न दोस्रो प्रश्न तिमीलाई ः के तिमी दिमाग भएर पनि दिमाग बिगार्दै तिमीलाई दोषी मानिरहेकाहरुलाई सफाई दिन सक्छौ त ? सबैले भन्छन् तिमी रिलको मात्रै नभई रियल लाईफको पनि हिरो हौ रे । के त्यही हिरो बनेर हुुँदै नभएको पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने नाममा कानूूनलाई ह’ति’या’र बनाउँदै यो समाजमा जन्मिएका ती म’तियारहरुको गुण्डागर्दीलाई स’माप्त पार्न सक्छै त ? यो देशमा कानून छ । कानूले तिमीलाई बा’ईजत सफाई दिएर दोषिलाई कारवाहीको कठघरमा उभ्याउँछ भन्ने विश्वास जसरी तिमीलाई छ नि आज तिम्रा फ्यानहरुलाई उस्तै विश्वास छ । र मलाई पनि ।
मुलुकी ऐन ज’ब’र्ज’स्ती कर णीको महलको १ नं मा भनेको छ,‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई कर णी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई कर णी गरेमा निजले ज’ब’र्ज’स्ती कर णी गरेको ठहर्छ’ भन्ने व्यवस्था हुँदा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई कर णी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई कर णी गरेमा निजले ज’ब’र्ज’स्ती कर णी गरेको मान्नु पर्ने ।’ बरु यही नियम नै ठीक थियो । १८ वर्ष मुनीकालाई नाबालिग घोषित गरेर मेरो समाजमा कानूनलाई ह’तिया’र बनाउँदै अधिकारको नाममा कानूनको दुरुपयोग गरेर दिनप्रतिदिन आ’परा’धिक मा’नसिकताका नाबालितहरुको जन्म भईरहेको छ । तिमी तिनै कानूनलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको ल’डाईँ पाईन्छ भन्ने एउटा गलत मा’नस’किता भएकी केटीको चंगुलमा पर्यो पल ।
प्रिय पल, नेपालको कानूनले बोलेको यो कुरा अनुसार त तिमीले पी’डितलाई कर णी गरेकै रहनेछौ नि त । उसो भए मेरो अर्को प्रश्न तिमीलाई ः के तिमीले निजलाई १५ वर्षको उमेर हुँदा कर णी गरेका थियौ ? निज बालिकाको भनाई अनुसार त उनी अहिले १७ वर्ष भइन । घटना १ वर्ष पहिलेको भएको हो भने यो कानूनले उल्लेख गरेको यो कुरामा कहीं कतै म्याच भएन त ।
नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा ‘गड फादर’ बिना आफ्नै मेहेनतमा पुरैपुरै इमान्दातिरताले नेपाली दर्शकको मनमा बस्न सफल तिमीप्रति म जस्ता तिम्रा फ्यानहरुको सगरमाथा हौ तिमी । तिम्रो एउटा फ्यान भएको नाताले तिमीलाई मन पराउनु मेरो अधिकार हो ।
प्रिय पल, आज तिमी जीवनको त्यो क’ठघरामा उभिएका छौ जहाँ म त के म जस्ता हजारौं हजार तिम्रा फ्यानहरुले पनि त्यो हिरासतलाई तो’डेर तिमीलाई बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । कानून माथि तिमीले जस्तै हामीलाई पनि पुरै विश्वास छ त्यसैले त अब कानून संशोधनको एउटा बहस नै बनिरहेको छ । ताकी कानूनको आडमा अधिकारको दुरुपयोग गर्न कुनै अर्को नाबालिगको जन्म नहोस् ।
तिम्री आमाको कोखलाई एकदिन पुज्ने छन् साराले किनकी उनले एउटा यस्तो छोरा जन्माईन् जो नाबालिगलाई ब’ला’त्का’र गरेको आरोपमा बा’ला’त्का’रीको नामले जेलमा बसिरहंदा एकाध बाहेक पुरै जनलहर तिमी बसेको हिरासतको बाहिर तिम्रो न्यायका लागि उर्लिरहेको छ ।
तिमी माथि ब’ला’त्का’रको आरोप लागेकै कारण आज नाबालिगको हकमा बनाईएको कानूनलाई संशोधन गरिन आवश्यक भन्ने बहस चलिरहेको छ । म त भन्छु जन्म लिनु छ भने तिमी जस्तै जन्म लिन सकियोस् । जस्ले देशको सिस्टमलाई नै बदल्ने हिम्मत राखेको हुन्छ । प्रिय पल, छिट्टै नै निर्दोश साबिात भएर बाहिर आऊ तिम्रो पर्खाई छ तिम्रा सबै फ्यानहरुलाई र मलाई पनि
काठमाण्डौको बबरमहलमा एकाबिहानै कार दुर्घटना, तीन जना घाइते